DRK134 Leak Tijaabiyaha - Shiinaha Shandong Drick qalabku
DRK134 Leak Tijaabiyaha waa inaad ahaatid sare iyo caqli loogu talagalay sida ay caadiga ah la xiriira. Waa lagu dabaqi karo si ay u tijaabiso hantida seal of pack dabacsan warshadaha cuntada, warshadaha farmashiyaha iyo warshadaha kiimikada maalin ah.
Control Micro-computer, bandhigay LCD, guddiga hawlgalka PVC;
Digital degree vacuum horena iyo dayactirka vacuum waqtiga;
World qaybaha pneumatic caan ah;
Dheeri Automatic for cadaadis joogto ah;
Automatic dejinta dambe-karka.
Shaabad imtixaanka hantida, imtixaanka baxsiga, imtixaanka dhamaystirmo xirmo, imtixaanka micro-baxsiga, CO2 ogaanshaha dillaac ah bacaha, baakadaha fin, dhalada, iwm
xirmo debecsan, awood caanaha bacaha, cheese, strip kafeega / bac, xirmo cake moon, guntin, baakad cunto mas, bacda shaaha, bariis bac, xirmo chips, xirmo cake, baakad cunto u faanin, pak tetra, bacda unug qoyan , bacda miraha qaraha
baakadaha Leak Tijaabiyaha